Turkiga iyo diyaaradaha dagaalka ee bilaa duuliyaha ah (Drones) - Tilmaan Media
in CAALAMKA, TEKNOLOJIYAD
Wargaysga Felt ee kasoo baxa dalka Jarmalka ayaa wax ka qoray guulaha uu Turkigu kagaaray dhanka Farsamada millateriga, kadib markuu Turkigu hormuud kanoqday soo saaridda tiknoloojiyada diyaaradaha dagaalka aan duuliyuhu wadin (Drone).
Wargayska oo warbixintiisa cinwaan oga dhigay “ Diyaaradaha TB2 Waxay guul kasoo hooyeen dagaalada”, ayaa wuxuu sheegay in istiraatiijiyadda Turkiga ee adeegsiga xirfadda iyo farasamada heerkasare ah ka muuqato ee Diyaaradda “Bayraktar” ay horseerdday in Turkigu is baddal ku sameeyo xaaladda awoodaha millatari ee bariga dhexe.
Warbixinta ayaa isbarbardhig ku samasay diyaaradda aan duuliyuhu wadin ee Maraykanka “MQ-9 Reaper” iyo tan Turkiga ee “Bayraktar TB2” oo wargaysku tilmaamay in ay tahay diyaarad shiishkeedu sareeyo islamarkaasna qiimaheedu jaban yahay marka loo fiiriyo kuwa Maraykanka.
Waxaa lagu xusay warbixinta in diyaaradda Turkigu si lamid ah tan Maraykanka, ay in kabadan 24 saac ay hawada ku jiri karto, sahmin karto yoolkeeda isla markaasna duqayn karto. Lkn Turkigu wuxuu raacay istiraatiijiyad ka duwan midda Maraykanka.
Warbixintu waxay sheegaysaa in ciidanka Turkigu diyaaradahan u adeegsadan si aad ooga xoog iyo saamayn badan tan Maraykan iyaga oo udagaal gala si raxan ah.
Suuriya, diyaaradaha Turkiga ee raxanta ahi waxay noqdeen awood cireed oo xoog badan. Haddana waxay guulo millatari oo lataaban karo kasamaynayaan dalka Liibiya, guulahaas oo u adeegaya danaha Turkiga sida warbixinta lagu sheegay.
Qiimaheeda jaban iyo astaamo kale oo ay diyaaradaan lagaar tahay
Wargayska ayaa intaas ku daray in diyaaradda “Bayraktar TB2” ay leedahay waxyaabo ay ku horayso oo ay kamid yihiin; in shiishkeedu aad u sareeyo oo aysan yoolka gafin islamaraasna qiimaheedu jaban yahay. Halka diyaaradda Maraykanka ee “MQ-9 Reaper” qiimaheedu yahay 16 malyan oo doolar, diyaaradda Turkiga ee “Bayraktar TB2” qiimaheedu waa 6 malyan oo doollar kaliya.
Diyaaradda “Bayraktar TB2” waxay xambaartaa gantaalada yaryar ee nooca “MIM-L” oo ah gantaallo lahagi karo islamarkaasna awood uleh in ay kagudbaan dhufaysyada dhulka hoostiisa ah.
Sida warbixinta sheegayso, astaamahaan ayaa usuurtagalin kara dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo in ay iska caabiyaan qawadaha waawayn.
Waddamo badan ayaa doonaya in ay helaan diyaaradaan, waxayna ugu dambeeyay oo Turkigu heshiis lagleen dalka Ukraine, heshiiskaas oo dhigaya in Ukraine laga iibiyo 12 xabo oo ah “Bayraktar TB2”, waxaana illaa iyo hadda lagu wareejiyay lix kamid ah diyaaradaha.
Wargayska ayaa u arka in Turkigu uusan noqon oo kaliya awood wayn dhanka diyaaradaha aan cidina wadin, laakiin sidoo kale waxay ka shaqeeyeen dadajinta in diyaaradahaan caalamka aad looga adeegsado.
Haatan dalal kooban ayaa leh diyaarado aan cidina wadin oo dagaal sida, Faransiiska, Maraykanka, Iiran, iyo Israaiil.
Wargaysku wuxuu warbixintiisa kusoo gabagabeeyay in hormarinta diyaaradahaan uu kadambeeyo Selçuk Bayraktar (41 jir) oo uu soddog u yahay madaxwaynaha Turkiga. Bayraktar Wuxuu wax kusoo bartay machadka Massachusetts ee tiknoolajiyadda ee ku yaalla Maraykanka. Wuxuuna hadda ka shaqaynayaa hormarinta diyaaradda Akıncı oo iyaduna ah diyaarad dagaal oo aan cidina wadin.